MAALIYADDA CAASHAQA EE FILMKA BASHAALKA
Mashiinka soo -saaridda xaaqinta caagga ah
Mashiinka dhejiska buraashka caagga ah
Mashiinka soo saarida xargaha caaga ah
Mashiinka extruding filament timaha dardaro caag ah
Mashiinka dhoobada dhoobada ah
Mashiinka extruding burush qurxiyo caaga
Mashiinka dhejiska cadayga caaga
Mashiinka dheemanka buraashka caaga ah
Badbaadada caagga ah ee mashiinka dheef -shiidka
Mashiinka dheef -shiidka ee caagga ah ee kalluumaysiga caagga ah
Mashiinka extruding caag nylon caaga
Caaga PET mashiinka extruding
Macmiilka & Sawirka Bandhigga
"Darbiga Sawirka Macaamiisha" ee shirkadda Makiinadaha Qingdao Zhuoya
Dhammaan macaamiisha soo booqatay macaamiisheena, waxaad ka heli doontaa inuu jiro darbi muujinaya sawirro badan oo ka mid ah macaamiisheenna oo nagala shaqeeya iskaashi ganacsi oo guuleysta. Waxaan diirada saarnaa khadka wax soo saarka mashiinka monofilament caag ah ilaa 20 sano. Iyada oo horumar joogto ah, waxaan des karaa ...
Shixnad cusub oo ah khadadka mashiinka buunshaha buraashka PET ee macmiilka suuqa Aasiya
17 -kii, Luulyo, waxaan u diyaarinnay haamaha rarka macmiilkayaga. Kani waa dhammaystiran PET & PP soosaarka buunshaha buunshaha. In kasta oo ay sabab u tahay xaaladda Covid 2019, macmiilkayagu ma iman karo oo nama soo booqan karo, waxay aamminsan yihiin tayada khadka mashiinka iyo adeegga shirkadda. Kilinigayga ayaa kormeeray khadka mashiinka ...
U oggolow adduunka oo dhan inuu si wadajir ah ula dagaallamo cudurka faafa
Cudurka sambabka cusub ee lama filaanka ah oo si lama filaan ah ugu faafay adduunka oo dhan ayaa halis geliyay amniga caafimaadka dadweynaha ee adduunka. Cudurada faafa ee waaweyn waa cadowga aadanaha oo dhan. Xaaladda cudurrada faafa, ma jiro waddan kaligiis wax ka qaban kara cadowgan guud, mana jiro dal is daryeeli kara oo dib u ...
Sidee loo ilaaliyaa mashiinka dheef -shiidka ee balaastigga ka dib markii furku dhammaaday?
1. Caag kasta wuxuu leeyahay heer ku habboon oo balaastik ah, iyo heerkulka wax -soo -saarka ee foostada mashiinka soo -saaridda fiilada waa in la xakameeyaa si loogu dhowaado xadka heerkulkan. Marka balaastigga granular uu ka soo galo foostada hopper, waxay marka hore gaari doontaa quudinta ...
Tijaabada PET Ku -dayashada timaha aadanaha ee dariiqa mashiinka fiber -ka timaha dardaro
Bishii Juun 04 -keedii 2021, waxaan si tijaabo ah u tijaabinnaa PET oo dhammaystiran xariiqa mishiinka timaha. Khadka PET -ka synthetic synthetic line -ka mashiinka dhoobada ayaa loo habeeyay si uu ula kulmo awoodda wax -soo -saarka oo leh qiime jaban. Laga soo bilaabo isku dhafka walxaha ceyriinka ah ilaa dhamaadka dhammaadka fiber -ka timaha ku dayashada PET, macmiilkayagu wuxuu ku qanacsan yahay t ...
Bixinta xaaqinka PET ee wareega mashiinka monofilament
Bishii Maajo 22 -keedii, 2021, waxaan u diyaarinnaa bixinta hal mashiin oo cusub oo ah xaaqin PET wareeg ah oo loogu talagalay macaamiisha. Waxay noqotaa mid aad iyo aad caan u ah faa'iidooyinkeeda. 100% jajabka dhalada PET dib loo warshadeeyay, khadka hawlgalka fudud, qiimaha wax soo saarka oo hooseeya iwm ayaa ka dhigaysa khadka mashiinkayaga inay soo dhaweeyeen macaamiisha tiro badan ...
Falanqaynta horumarinta suuqa ee mashiinka sawirka monofilament caag ah
Horumarinta sayniska iyo teknolojiyadda, heerka otomaatiga ee mashiinka sawir -qaadista caagga ah ayaa si tartiib tartiib ah loo hagaajiyaa. Laga soo bilaabo saddexdii shaqaale ee hore ilaa hawlgalka hadda, waxay u baahan tahay oo keliya hal shaqaale si uu u hawlgalo. Waxay socon kartaa iyada oo aan lahayn xirfadleyaal leh xirfado iyo aqoon wax ku ool ah ...
Tijaabinta xariiqa mashiinka sifeynta burushka cusub ee PET ee macmiilka Sri Lanka
Bishii Abriil.26,2021, waxaan dhammeynay tijaabinta mid ka mid ah khadadka mashiinka sifeynta buraashka PET ee macmiilkayaga Sri Lanka. Khadka mashiinkan wuxuu qaatay 50 maalmood laga bilaabo xaqiijinta amarka si loo tijaabiyo sida waafaqsan heshiiskayaga. Laga soo bilaabo qalajinta alaabta ceyriinka ah si aad u fuusho fiilooyinka, hagaajinta foornada, goynta fiilada iyo w ...
Shabakadda badbaadada caagga ah
Shabakadda badbaadadu waa shabaq ilaalin oo hoos yaal ama dhinaceeda marka la rakibayo qalabka dhismaha ee joogga sare ah ama bandhigyada farshaxanka si looga hortago shilalka ay sababaan dadka ama shaygu. Shabakadda badbaadadu waxay ka kooban tahay jir shabakad ah, xadhko dhinac ah, xadhig iyo seedaha. Jirka saafiga ah waa knitte ...
Baadhitaanka xarigga mashiinka xadhigga ee PET
Xadhigga PET -ka caaga ah waxaa soo saaray 100% dhalada PET ee dib loo warshadeeyay, markaa qiimaha wax -soo -saarku waa mid aad u jaban. Xadhigga PET -ka ayaa lagu soo dhoweeyaa suuqa waxayna noqon kartaa halkii noocyo badan oo xadhko caag ah sida PP, PE, PA iwm. Mar. 27 -keeda, 2021, shirkadeenu waxay tijaabisay hal cusub oo cusub oo xarigga wax -soo -saarka PET ah oo loogu talagalay ...
PBT buraashka buraashka qurxinta/shixnadaha fiber -ka Mar 10 -keeda, 2021
Markay ahayd Maarso 10 -keedii, 2021, waxaan u diyaarinnay shixnadaha PBT khadka wax -soo -saarka buraashka qurxinta ee macmiilkayaga Hindida ah. Wadarta saddex koontiinar oo looga baahan yahay khadka wax -soo -saarka oo dhammaystiran. Caag PBT PET laynka mashiinka dhoobada buraashka qurxinta waxaa loogu talagalay soo saarista monofilament tayo sare leh oo loo adeegsan doono t ...
Xaaladda suuqa walxaha caagga ah ee dib loo rogay
Dhamaadka fasaxa Ciidda Guga, waxaa jira war wanaagsan oo soo noqnoqda oo ku saabsan dib -u -warshadaynta. Warshaduhu waxay dib u bilaabaan shaqadii iyo wax soo saarkii, waxayna ku fiican yihiin aragtida suuqa. Waxaa la filayaa in suuqa PE ee dib loo warshadeeyay uu sare u kici doono qiyaastii 100-200 yuan/ton muddada dambe. Waxaan rajaynaynaa xaalad ...
Qingdao Zhuoya Makiinado Co., Ltd. waa sayniska iyo teknolojiyadda aqoon-u-xoogbadan oo isku dhafan cilmi baaris iyo horumarin, been-abuur, iibin iyo adeeg
Pingcheng West Road, Jiaoxi Zone Zone, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China.